10 အတွက် 2019 လူကြိုက်အများဆုံးဟို steroids ရော်အမှုန့်
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကာယဗလတစ်ဦးချင်းစီ, အထူးသဖြင့်ယောက်ျားများ၏ကြည့်တိုးတက်အောင်ရည်ရွယ်အသက်အကြီးဆုံးအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်သဘောတူနိုငျသညျ။ လူတိုင်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလိုချင်သောရလဒ်နှင့်အတူအားကစားရုံတို့သို့နေစဉ်, ဘုံပိုင်းခြေစီပိုကြည့်ကောင်းသွားအပိုအဆီရှို့နှင့်ပိုပြီးကြွက်သားကိုထည့်သွင်းဖို့လိုလားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အမြိုးသမီးမြားအဘို့, ဆွဲဆောင်မှုဣတ္ကြည့်၏ပွနျလညျထူထောငျကာယဗလပြီးနောက် key ကိုမျှော်လင့်ထားသည်။ သို့သော်ဤအောင်မြင်ရန်, သင်ပိုင်ခွင့်တစ်ရပ်ကိုရှေးခယျြဖို့ရှိသည် ဟို steroids (AAS) သင်အလိုရှိသောအရာကိုပြီးမြောက်ရန်။
အကြှနျုပျတို့သညျစုံလင်တစ်ကောက်ကိုကူညီအကြံပေးချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းအကြံပြုချက်များနှင့်ပြည့်စုံသည်ဤဝယ်မယ့်လမ်းညွှန် created ဟို steroids (AAS) ကုန်ကြမ်း.
ပူပြင်းတဲ့အရောင်းရဆုံး steroids ရော် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ အများဆုံး ထိုးသွင်းလူကြိုက်များ steroids ရော် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ အကောင်းဆုံးခံတွင်း steroids ကုန်ကြမ်း
testosterone Enathate / စမ်းသပ်ခြင်း, E
rating:★★★★★ Trenbolone Acetate / Tren Ace ကို / Tren တစ်ဦးက
လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းကိုအကြှနျုပျတို့မှအကြီးမားဆုံးရောင်းချမှု steroids ကုန်ကြမ်း
အလွယ်ကူဆုံးစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်နှင့်စျေးအသက်သာဆုံး steroids ကုန်ကြမ်း
Trenbolone Acetate ကြောင့် Enanthate Ester ဝင်းတွင်ပိုမိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်တာမှ Trenbolone Enanthate သာ. အစွမ်းရှိ၏။
အဆိုပါ Trenbolone ဟော်မုန်းနှင့်အတူအများစုမှာအသုံးပြုသူများက '' ပထမဦးဆုံးသွားလာရင်းအမြဲ Trenbolone Acetate ဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင်အဆိုပါထိပ်တန်း 10 လူကြိုက်များသောဟို steroids ရောရှိပါသလား:
လူကြိုက်အများဆုံးဟို steroids အမည်များ
လူကြိုက်အများဆုံး Steroid တစ်မျိုးရွေးချယ်မှုနေသောခေါင်းစဉ်:
Dianabol အမှုန့် (methandrostenolone)
Deca Durabolin (nandrolone decanoate အမှုန့်)
Winstrol အမှုန့် (stanozolol)
Equipoisematerial (ကုန်ကြမ်း undecanoate boldenone)
အများစုမှာထိရောက်သောဟို steroids အမည်များ
အသုံးပြုသူအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်, အထိရောက်ဆုံး steroids နေသောခေါင်းစဉ်:
Trenbolone အမှုန့် (ကြည်လင်သောဆုရှင်)
တစ်ဦးဟို steroids ရွေးချယ်တဲ့အခါအဘို့အကြည့်ဖို့အနည်းငယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်များရှိပါသည်။ သငျသညျကိုယျအဘို့ပြီးပြည့်စုံတစျခုကောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်။
ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းများအတွက် bulking steroids
အဆီမီးရှို့ steroids ဖြတ်တောက်
ဆေးဝါးနှင့်တရားမဝင်ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုလုံးအဘို့, AAS ယူနိုင်ပါတယ်:
Mesterolone (Proviron အမှုန့်)
Methandienone (Dianabol အမှုန့်)
Oxandrolone (Anavar အမှုန့်)
Oxymetholone (Anadrol အမှုန့်)
Stanozolol (Winstrol အမှုန့်)
Trenbolone Acetate အမှုန့်
Boldenone undecylenate ကုန်ကြမ်း (Equipoise)
Methenolone enanthate အမှုန့် (Primobolan)
Nandrolone decanoate အမှုန့် (Deca Durabolin)
2019 အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးဟို steroids နှိုငျးယှဉျ
ထုတ်ကုန်အမည် Testosteorne Enanthate အမှုန့် Dianabol အမှုန့် Trenbolone Acetate အမှုန့် Anavar (Oxandrolone) အမှုန့် Stanozolol အမှုန့် လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းကုန်ကြမ်း Nandrolone Decanoate အမှုန့် Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်း Drostanolone Propionate အမှုန့် Methenolone Enanthate အမှုန့်
ဖြတ်တောက်ခြင်း ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆
ထုထည် ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆◆ ◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆ ◆
ကျွန်ုပ်တို့၏ 10 လူကြိုက်အများဆုံးဟို steroids ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
1: testosterone အမှုန့်
testosterone အမှန်တကယ်သဘာဝကျကျသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်လုပ်ကြောင်းအဓိကဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Steroid တစ်မျိုးသိသာသငျသညျရှိစေခြင်းငှါသောပုလ်ကြွက်သားနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုဖွဲ့စည်းရန်ကူညီပေးသည်အနေဖြင့်ယခု, ဒါကြောင့်လည်းယင်းသို့သောသင်၏အနက်ရှိုင်းသောအသံနှင့်မျက်နှာဆံပင်ကဲ့သို့အခြားအထီးစရိုက်များများအတွက်တာဝန်ရှိပါတယ်။ တစ်ဦးစွမ်းဆောင်ရည်-တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့အခါ, testosterone, သင့်ကြွက်သားအရွယ်အစားနှင့်ခွန်အား၌အသီးအနှံကိုကူညီကြွက်သားပျက်စီးမှုကိုလျော့ချနှင့်ကြွက်သားပြန်လည်နာလန်ထူတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
2: Trenbolone အမှုန့်
Trenbolone ကျယ်ပြန့်အစဉ်အဆက် created အင်အားအကောင်းဆုံးဟို steroids တဦးအဖြစ်မှတ်ယူသည်။ တကယ်တော့ဒါဟာကြောင့် 500 မှ 500 ၏နှိုင်းယှဉ် 100 မှ 100 ၏အန်ဒရိုဂျင်အချိုး testosterone ဟော်မုန်းထက်ငါးဆပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကာယဗလအဘို့, အထူးသဖြင့်, ဒီရိုးရှင်းစွာသူတို့ကြွက်သားနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုအကျိုးအမြတ်အပေါ်ထုပ်ပိုးနိုငျပုံကိုလျင်မြန်စွာကြောင့်လူကြိုက်များ Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစသူတို့ကသဘာဝကျကျလိုထက်အဆီမြန်ရှို့ချင်သောသူတို့အားကျေးဇူးပြုတတ်၏။
3: Anavar (Oxandrolone) အမှုန့်
4: Nandrolone Decanoate အမှုန့်
Nandrolone Decanoate အားကစားသမားတိုးမြှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင်အများဆုံးအသုံးပြုဟို steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာကောင်းစွာတစ်ဦးလွန်စွာအကျိုးရှိ Off-ရာသီအစုလိုက်အပြုံလိုက် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများပေမယ့်သူ့ရဲ့ကုထုံးအကြိုးခံစားခှငျ့မြားစှာအားကစားစက်ဝိုင်းထဲမှာလည်းအကြိုက်ဆုံးင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ကြီးမားတဲ့ကုထုံးအကြိုးခံစားခှငျ့ငှါ, Nandrolone ဟော်မုန်းဆေးဝါးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အတွက်အများဆုံးအကျိုးပြုဟို steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။
5: Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်း
Boldenone Undecylenate ဟိုအန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးဆင်းသက်လာတဲ့ testosterone ဟော်မုန်းဖြစ်ပြီး testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကာဗွန်တဦးတည်းနှစ်ဦးအနေအထားမှာတစ်ဦးကဆက်ပြောသည်နှစ်ဆနှောင်ကြိုးအတွက်အလွန်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Undecylenate Ester ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်3နေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုလိုက်နာဖို့ဟော်မုန်းတစ်ခုနှေးကွေးနေစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြန့်ချိနှင့်အတူ, ဆေးထိုးပြီးနောက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 4-21 ရက်ပေါင်း Boldenone အတွက်အထွတ်အထိပ်လွှတ်ပေးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
6: Dianabol အမှုန့်
Dianabol လူကြိုက်အများဆုံးတွေထဲကအပေါင်းတို့နှင့်အချိန်အရေးကြီးဆုံးဟိုစတီရွိုက်၏တဦးတည်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမရှိရင်ဒီလူကြိုက်အများဆုံးပါးစပ်အစဉ်အဆက်စျေးကွက်ဝင်တိုက်ဖို့ Steroid တစ်မျိုးနှင့်မည်သည့်ပုံစံအတွက်ရေပန်းအစားဆုံး steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ နီးပါးအမြဲတစ်ဦးပါးစပ်တက်ဘလက်အဖြစ်ကိုတွေ့နေစဉ်, Dianabol တစ်ခုထိုးဆေးဖြေရှင်းချက်အဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်, သို့သော်တက်ဘလက်များအုပ်ချုပ်ရေး၏အဓိကလမ်းကြောင်းကိုယ်စားပြုသည်။
7: Stanozolol အမှုန့်
ပိုမိုလူသိများဟိုစတီရွိုက်၏တဦးတည်းနေစဉ်, Stanozolol လူဦးရေကို အသုံးပြု. Steroid တစ်မျိုးအများစုအကြားအလွန်ရေပန်းစားသည်။ ဒါဟာနည်းလမ်းများစွာအတွက်လုံခြုံစိတ်ချစွာယောက်ျားမိန်းမတို့ကအသုံးပြုနိုင်မယ့်တရားမျှတစွာပျော့ဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အညီအမျှအရေးကြီးသောကြောင့်မြောက်မြားစွာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ကြိုးပမ်းအဘို့အမြင့်မားထိရောက်သောသက်သေပြခဲ့သည်။
9: Drostanolone Propionate အမှုန့်
စျေးကွက်ပေါ်မှာရှိသမျှ Masteron များ၏အများစု Drostanolone Propionate ဖြစ်လိမ့်မည်။ Drostanolone Propionate ဟို Steroid တစ်မျိုးဆင်းသက်လာတဲ့ dihydrotestosterone (DHT) ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသ Masteron ဒီအရိုးကြွက်သား၌တွေ့သော 2-hydroxysteroid dehydrogenase အင်ဇိုင်းကဇီဝဖြစ်စဉ်ပျက်ပြားခြင်းမှဟော်မုန်းကာကွယ်ပေးသည်, ဖွဲ့စည်းပုံကာဗွန်3အနေအထားမှာမီသိုင်းအုပ်စုတစ်စု၏ထို့အပြင်ခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးသော DHT ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအလွန်ဟော်မုန်းရဲ့ဟိုသဘောသဘာဝတိုးပွားစေပါသည်။
10: Methenolone Enanthate အမှုန့်
Methenolone Enanthate စျေးကွက်အပေါ်အလုံခြုံဆုံးဟိုစတီရွိုက်၏တဦးတည်းစဉ်းစားနှင့်ကဤပြောဆိုချက်ကို back ဖို့အကောင်းဆုံးဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သယ်ဆောင်နေပါတယ်။ တကယ်တော့ဒီ Steroid တစ်မျိုးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမပါဘဲသိရပါကလေးများနှင့်အချိန်မတန်မီမွေးကင်းစဆက်ဆံဖို့ကိုအောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာအစအရိုးပွရောဂါနှင့် sarcopenia များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ် ..
ယုံကြည်စိတ်ချရသောဟို steroids ရင်းမြစ်ဝယ်ယူမီကစဉ်းစားရန်
သင်အလွယ်တကူအွန်လိုင်းစတီရွိုက်အမှုန့်ကိုဝယ်သူတို့ကိုအမည်ဝှက်သင့်အိမ်မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သျောလညျးသငျစတီရွိုက်အမှုန့်မိန့်မတိုင်မီအချို့သုတသေနပွုသငျ့သညျ။ ပထမဦးစွာသင်ညာဖက်စတီရွိုက်အမှုန့်လာပြီဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိထွက်ရှာပါ။ သငျသညျစတီရွိုက်အမှုန့်ကိုသုံးပါသောအားကစားရုံမှာမိတ်ဆွေတွေနဲ့ရှိပါကသူတို့အသုံးပြုနေသည်ထားတဲ့သူတွေကိုထွက်ရှာအရင်ကဆိုရင်များအတွက်အကောင်းဆုံးသူတွေကိုအကြောင်းကိုမေးကြည့်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းအွန်လိုင်းဖိုရမ်များမှာကတခြားခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ထံမှအကြံဉာဏ်တောင်းလို့ရပါတယ်။
သင်၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည်အမျိုးမျိုးသော steroids မှုန့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Reading လည်းအသုံးဝင်သည်။ အထူးသဖြင့်, သင်သည်အဘယ်သို့ steroids အမှုန့်အလုပ်ရှာဖွေသင့်တယ်, ဘယ်လိုအစားအသောက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များကိုသူတို့နှင့်ဖြစ်နိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူကောင်းစွာသွားပါ။ သင်တစ်ဦး Pre-တည်ဆဲခွအေနအေရှိပါကသင်သည်အပြီးဖြစ်နိုင်သည်သီးခြား steroids အမှုန့်ကိုသုံးပြီးရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေ, အားနည်းချက်တွေထွက်ရှာပါ။
အဆိုပါယုံကြည်စိတ်ချရသော steroids ပေးသွင်း Choose
တရုတ်မှာတော့ရောင်းချရန် steroids အမှုန့်ထုတ်လုပ်ကုမ္ပဏီအများအပြားရှိပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်းစတီရွိုက်အမှုန့်ကိုဝယ်ယူလျှင်သို့သော်, သင်ဖြည့်စွက်၏မူလအစ၏သေချာပါစေဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။ စတီရွိုက်ကမ္ဘာတဝှမ်းမှုန့်နှင့်များစွာသောမြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများများအတွက်ကြီးမားသောမြေအောက်စျေးကွက်သင်သည်တရားမဝင်ဟိုစတီရွိုက်အမှုန့်တင်ပို့နိုင်, အထူးသဖြင့်ဥရောပကနေရှိပါသည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးကို ထောက်. , ကလူသိများတဲ့ကုမ္ပဏီများမှကနေအတည်ပြု steroids အမှုန့်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် cGMP အောက်မှာထုတ်လုပ်နေကြပြီးနှင့်အရည်အသွေးခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းမရှိလျော့နည်း 98 ထက်% အာမခံနေကြသည်။ COA; HPLC; HNMR စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများပေးနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော် High-end စျေးကွက်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ကြွယ်ဝအတွေ့အကြုံကိုရှိသည်။
1.You (ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်၏ဝယ်ယူမှုအလို့ငှာပေးပို့နိုင်ပါတယ်[အီးမေးလျ protected]ကျနော်တို့လက်ခံရရှိတစ်ချိန်က), အ quotation အထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။
2.Payment ထောက်ပံ့ကှကျလက်ခံ & လိပ်စာ doneand ။
3.The ကုန်ပစ္စည်းများနံပါတ်နှင့်ခန့်မှန်းခြေဆိုက်ရောက်နေ့စွဲခြေရာခံ, ခြေရာခံခြင်းနံပါတ်, အထုပ်ရုပ်ပုံ deliveredwith ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဖြေဘဏ်လွှဲပြောင်း; ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ; MoneyGram; Bitcoin
A: ဟုတ်ကဲ့, ထုတ်ကုန်များ၏အများစုမှာအခမဲ့နမူနာအဖြစ်ပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်း, ဒါပေမယ့်သင်ကရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ပေးဆောင်လျက်ရှိရ၏။
ဖြေ COA, HPLC, HNMR ရရှိနိုင်ပါသည်။ နှင့်တတိယပါတီဓာတ်ခွဲခန်းများအားဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်းစာတမ်းများအချိန်ဖို့အချိန်ပေးလိမ့်မည်။
ဖြေ 1 ~3အတွင်းမှာပဲငွေပေးချေမှုကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ရက်ပေါင်းအလုပ်လုပ် (တရုတ်အားလပ်ရက်မပါဝင်) ။ ။
A: ဟုတ်ကဲ့, ပိုကြီးတဲ့အရေအတွက်အဘို့ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းပိုကောင်းတဲ့စျေးနှုန်းများနှင့်အတူကိုထောကျပံ့။